Mudane ka tirsan golaha wakiilada Somaliland oo Hargeysa lagu xiray – Balcad.com Teyteyleey
Mudane ka tirsan golaha wakiilada Somaliland oo Hargeysa lagu xiray
By Abdi Malik	 On Aug 8, 2017
Wasiirka arrimaha gudaha maamulka Somaliland Yaasiin Maxamuud Faratoon ayaa sheegay in booliiska ay xabsiga u taxaabeen xildhibaan ka tirsan aqalka wakiilada Somaliland dhacdo la xiriirtey rasaas maanta lagu ridey baarlamaanka awgeed.
Xildhibaankan oo lagu magacaabo Yuusuf Cali-Koore ayuu wasiirka sheegey in nin ka mid ah illaalada xildhibaanka uu rasaas ku ridey baarlamaanka, markii ciidanka isku dayeen in ay xiraana uu isaga is hortaagay, sidaasina loo xirey xildhibaanka.
Wasiirka ma uusan bixinin wax faahfaahin intaasi dhaafsiisan, balse dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in dhacdada ay la xiriirto muran la sheegey in uu ka dhashay doorashada guddoomiyaha aqalka wakiilada.
Dhinaca kale guddoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland Aadan Xaaji Cali Axmed ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in maxkamadda ay qabatay dacwad la xiriirta muranka doorashada guddoomiyaha baarlamaanka, taasi oo uu soo gudbiyey xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle oo sheegey in uu isaga ku guuleystey codbixintii dhacday.
Dhinaca kale doorasho dhacday maalintii Axada ayaa guddoonka baarlamaanka waxa ay sheegeen in uu xilka guddoomiyaha ku guuleystey Baashe Maxamed Faarax oo badali doona Cabdiraxmaan Cirro oo xilkaasi iska casiley kadib dhawr iyo tobon sano oo uu hayay.
The post Mudane ka tirsan golaha wakiilada Somaliland oo Hargeysa lagu xiray appeared first on Ilwareed Online.
Cod-bixintii Doorashada Madaxtinimo ee Kenya oo soo xirantay iyo natiijada oo la sugayo
Wafdi ka socda Qaramada Midoobay oo gaaray magaalada Baydhabo